Gaa Leta Cu Chi Tunnels, na Vietnam | Akụkọ Njem
Gaa na Cu Chi Tunnels, na Vietnam
Mariela Carril | | Nduzi, Vietnam
Vietnam Ọ bụ ebe a maara maka osimiri ya kamakwa maka akụkọ ihe mere eme nke oge a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agha agha ya na United States nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri. Ọ bụ ya mere o ji nweta ebe kwesịrị ekwesị na akụkọ ntolite ụwa.
Ihe nketa nke agha ahụ dịgasị iche ma site na nnwere onwe gaa na ihe nkiri nke agha ahụ n'onwe ya: ụmụ nwanyị di ha nwụrụ, ụmụ mgbei, ndị ebipụrụ. Ma akụkọ banyere agha ahụ na-adị ndụ ma mee ka ndị njem si n'akụkụ ụwa nile bịa ịhụ ya. Ma otu n'ime ebe a chọrọ bụ Cu Chi ọwara network.
1 Ebee ka tunnels dị
2 Gaa na Cu Chi Tunnels
Ebee ka tunnels dị
Netwọk a nke tunnels n'okpuruala ha anọghị nso na obodo Ho Chi Minh. Nye ụfọdụ 70 kilomita ọ dịghị ihe ọzọ, gawa northwest. Ho Chi Mnh bụ Saigon oge ochie, isi obodo nke obodo French ochie nke Indochina na obodo kachasị ukwuu na mba ahụ. A na-eme atụmatụ na n'ime afọ iri, ndị bi na ya ga-eru ihe dịka nde mmadụ iri na anọ.
Akpọrọ ya otu a kemgbe 1976, na-asọpụrụ onye ndu mbụ nke North Vietnam n'oge agha ahụ m kwuru na mbụ nke ugwu, nke China na ndị komunizim na-akwado, na ndịda, nke United States na-akwado. Ọ dị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ ihe karịrị 1700 kilomita site na Hanoi, obodo ọzọ dị mkpa na Vietnam. Ọ dị naanị mita iri abụọ n’elu ọkwa oke osimiri yana naanị kilomita iri na itoolu site na mpaghara Cambodia.
Ho Chi Minh nwere ihu igwe dịpụrụ adịpụ oke iru mmiri na afọ na-ekewa abụọ isi a kara aka: ezo na udu mmiri. Nke mbụ na-amalite site na Mee ruo Ọktọba na nke abụọ site na December ruo Eprel. Ogologo okpomọkụ bụ 28 ºC ya mere n'agbanyeghị oge ọ bụla n'afọ ị na-aga, ọ na-ekpo ọkụ mgbe niile dị ka hel. N'ezie, n'oge okpomọkụ ọ ka njọ.
Ebe dị anya n’etiti Ho Cji Minh na Cu Chi Tunnels dị ihe dị ka kilomita iri anọ ya mere njem ahụ were nanị otu awa. Otu ụzọ isi ruo ebe ahụ bụ ịdebanye aha maka njegharị. Ha dị ọtụtụ ma dị ọnụ ala ma ị nwere ike isonye ọkara ụbọchị maka ihe dị ka 100 dongs gbakwunye ọnụ ụzọ nke tunnels. Na mkpokọta, ụdị njegharị a na - eburu gị n’elekere asatọ nke ụtụtụ wee laghachite gị n’obodo ahụ n’ihe dị ka elekere abụọ nke ehihie.
Wayzọ ọzọ iji ruo ebe ahụ bụ site na iji bọs ọha na eze. E nwere ụzọ abụọ nke tunnels ma na-aga na gị onwe gị na-enye ohere ịmara otu akụkụ nke tunnels, ndị Ben duoc, nke ụlọ ọrụ ndị njem njem anaghị etinyekarị (ha na-elekwasị anya na ngalaba Ben dinh, karịsịa ndị njem nleta na nke ahụ, kwesịrị ịkọwapụta, abụghị ezigbo akụkụ nke ntanetị ọwara). Ha na-ekwu na ha na-akpọrọ gị ebe ahụ n'ihi na ọwara buru ibu ma dịkwa mfe maka oke ozu ndị Westerners).
Maka akụkụ ya tunnels ndị Ben Duoc bụ ndị a kacha leta n'etiti ndị Vietnamese ma ha dịtụ anya karịa ndị ọzọ, mana ihe dị mma bụ na ha bụ akụkụ nke netwọkụ ama ama ama. Nwere ike isi bọs mpaghara si na Ben Thanh Station nke dị n'ihu Ben Tanh Market. Ruo afọ ole na ole gara aga ị nwere ike ịnara ya bọs 13, ma taa ị ga-atụgharị: ị na-eji bọs 88 ebe ahụ ma pụọ ​​na nkwụsị na-esote, ebe a na-adọba ụgbọala 24/9. Bus 13 gafere ebe ahụ ka ị were ya na tụlee gị n'èzí ọdụ ụgbọ Cu Chi.
Fagbọ ala ụgbọ ala dị gburugburu 7,000 dong. A na-azụta tiketi elu ụlọ ozugbo, site na onye na-elekọta ụlọ na-abịaru oche ma na-agbanwe mgbe niile. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị ma ọ bụ na akpịrị na-akpọ gị nkụ ma ọ bụ na ị chọrọ iweta ihe maka nleta ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta ya n’elu bọs ahụ n’ihi na ndị na-ere ahịa n’okporo ámá mgbe nile. Ọ dabara nke ọma ụgbọ ala ndị a dị mma ma nwee ntụ oyi ha nwekwara TV. Njem ahụ na-ewe otu awa na ọkara.
Ozugbo ị nọ na Cu Chi ọdụ ị nwere ike ileghara "ndị ọrụ njegharị" niile ga-achọ ijide gị dị ka ndị nduzi ma bido ịtụ egwu. Ga-enweta ezigbo ọnụ ahịa site na iji ụgbọ njem gụnyere n'etiti ọdụ Cu Chi na tunnels. There si ebe ahụ were bọs 79 Gbalịakwa gwa onye ọkwọ ụgbọala ka ọ gwa gị ebe ị ga-apụ, yabụ nọdụ ya nso. Vehiclesgbọ ndị a nwekwara ntụ oyi na njem a were nkeji iri ise.
Ọ bụrụ na ị nwere ụzọ n’ihu gị, ị ga-ahụ nke ahụ n’otu oge ị na-abịaru ebe ụzọ jikọtara ya na nnukwu akara na-acha anụnụ anụnụ Ọ na-egosi aka ekpe Ben Duoc tunnels na n'aka nri nke Ben Dinh. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ileta Ben Dinh ị ga-apụ ebe ahụ wee jee ije nke njem ahụ, ma ọ bụrụ na ịnweghị ịga n'ihu na bọs na Ben Duoc. Ka ịghara ihie ụzọ, ọ kacha mma ịjụ onye ọ bụla ma ị nọ n'ụgbọ ala ziri ezi.
Gaa na Cu Chi Tunnels
Zọ mbata nke Ben Duoc tunnels Ọ dị ihe dịka 90 puku dongs ma nwee tiketi abụọ. Otu na-efu 70 puku na nke ọzọ 20 puku na ị nweghị ike ịzụta ma. Ha gụnyere a eduzi na e nwere ihe ngosi nke ngwá agha America na bọmbụ. Nweghị ike ịnọ ebe ahụ ogologo oge n'ihi na onye nche na-abịa ozugbo ma manye gị ịga njem ahụ.
Nleta ahụ malitere na a ngosi uwe na ngwa agha, na mannequins, na ntule nke vidiyo nkeji 15 ojii na oji nke na-akọ nchịkọta nke agha ahụ adịghị ezigbo enyi na ndị America. Mgbe ahụ ee, tunnels na-amalite. E nwere ọtụtụ ngalaba na ị na-adọ aka ná ntị mgbe niile banyere claustrophobia. Ha na-ekewa n'ime obere mkpụmkpụ agba na ee, ha dị obere ebe ọ bụ na tunnels ndị a karịsịa, dịka m kwuru n'elu, abụghị ndị njem nleta kachasị.
Luckily e mesikwuru ha na ihe ha di mma. Ha na-enyekwa gị a ọkụ otu n'ime ndị ahụ na-nko na isi na onye ndu onwe ya na-aga na a tọọchị ya mere ọ dị ezigbo mma. Gafere corridor na obere ụlọ ndị jere ozi dị ka ụlọ nzukọ na ụlọ ọgwụ. You'll ga-ahụ ọnyà, ụzọ nyocha ndị iro na ụzọ mbata nke ntanetị siri ike na ala, ngwá agha, foto ochie na atụmatụ ma n'ezie, ihe ncheta. Ojuju.
Laghachi na ị ga-ewere bọs 79 ọzọ (nke na-agba naanị ruo 5:30 pm). Ọ bụrụ na ị tufuo ya, ịnwere ike ịga ọgba tum tum gaa ebe a na-akpọ Cu Chi mana ọ ga-efu gị ihe. Ma ee, bọs 13 gaa obodo. Ugbu a, ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịmata nke ahụ tun din, ibu na mma emegharị njem, ihe ị na-eme bụ pụọ na nrutu nke ụzọ na-eje ije kwupụta n'ọnụ ụzọ.
Ekwesịrị m ịgwa gị nke ahụ ebe a enwere mmadụ kariri oge niile nakwa na a na-emegharị tunnels niile iji nabata ndị njem. Cheta na ọ dịtụbeghị akụkụ nke ezigbo netwọkụ mbụ. N'ikpeazụ, ihe na-asọpụrụ ahụhụ dị mkpa yana karama mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Gaa na Cu Chi Tunnels, na Vietnam
Ihe ị ga - eme na Galicia n'oge ọkọchị